Ukusetyenziswa kwe-SIG ukulawula nokukhusela iDengue - Geofumadas
Ukusetyenziswa kwe-GIS ukulawula nokukhusela iDengue
Agasti, 2014 Geospatial - GIS, SuperGIS
Kwimeko yethu yaseMesoamerica kunye neentlobo zehlabathi eziqhelekileyo, i-Dengue isifo esifanayo ngexesha lezimvula. Ukwazi apho ininzi inani leziganeko ezenzekayo ngokuqinisekileyo ngumsebenzi apho izicelo ze-GIS zinikeza iziphumo ezibalulekileyo.
Ndiyakhumbula ukuba xa ndisemntwaneni, i-dengue yayingeyifayo njengamanje; nje ngeveki yokuphumla ngeentsholongwane, iintlungu zomzimba, amaninzi amanzi kunye nokuzisola ngokungakwazi ukudlala umdlalo omnandi webhola lebhola kwidaka kunye nabahlobo bommandla. Namhlanje siyabulala, ukuba umntu angena kulo ugqirha unokufa ezinsukwini ezimbini kwidilesi ephazamisayo yeeplatelet.
Kodwa ingxaki yedengue kwimimandla yasezidolophini yaseMesoamerica akulula ukuyixazulula. Inambuzane enomdaka (Aedes aegypti) ihlala emanzini ahlambulukileyo, ajikelezayo, ngoko ke inokuthi ibe yintambo yeqashiso esingenanto okanye kwindawo yokutshala. Ekugqibeleni, indlela yokulwa nayo kukutshatyalaliswa kweentambo ezidibeneyo kunye ne-fumigation. Ngaphandle kolwazi lwendawo, lo msebenzi unokuphela kwaye awuvelisi.
Umsebenzi othakazelisayo ekusetyenzisweni kweeNdawo zoLwazi ngeeNdawo zoPhando kwiinkalo zocwangco yimeko yeTaiwan. Injongo kukuhlalutya indlela inambuzane esulelekileyo ichithwa phakathi kweendawo zokuhlala kwaye, ngale ndlela, ukufumanisa iindlela zokuhamba ezihamba phambili phakathi kwexesha ngalinye. Ngoko ke, ukulinganisa kwendawo kunye nexesha lexesha kuthethwa ngxeshanye.
Ngokumisela inethiwekhi yendalo, abaphandi banokufumanisa indawo yokuhlala yentsholongwane egciwane kwaye babale iindlela ezihambayo zokuhamba kwabo kwaye bawaphephe ekuhambeni kule mizila.
Iziphumo zolu phando, oko kwenzakalise amandla uqhagamshelwano kothungelwano zendalo ngokuthi balinganisele iipaseji zothumelo iingcongconi bosulelekile, ungakwazi ngempumelelo ukulawula ukusasazeka ze fever. Ezi zintathu ziinjongo zophando zi:
Ukusebenzisa uhlalutyo lwezentengiselwano lwezendalo ukufumanisa iikhodi zokusasaza eziphambili zokutshutshisa ukunyuka kwamazinyo ezigciwane ngexesha kunye naphakathi kwexesha ngalinye.
Yenza iziphakamiso ezinxulumene neendlela eziphambili zokuhanjiswa kwee-corridors ukuyeka ukusasazeka kwezimiyane ezisulelekileyo.
Yenza isofthiwe ye-GIS ukudibanisa idatha yohlalutyo kunye neziphumo kwaye ubonise ulwazi kwimaphu.
Ngenxa yoko, le miba ilandelayo ingatholakala:
Ukusabalaliswa kwexesha lesithuba se-dengue fever.
Xa kuvela ekusasazeni kwexesha lesithuba se-dengue epidemic, ukunyuswa kwabantu kunye nokunyakaza kwamangqungqwana asulelekile. Khumbula ukuba i-radius yokuhamba kwentshukumo ayikho mkhulu kuneemitha ze-100, apho i-infection ye-infection ifumaneka ngexesha; ngoko ukusasazwa kwayo ngokuqhubekayo. Ukuba indlela ingafumaneka, kunokwenzeka ukuba uyinqumle ngokusebenzisa amandla angaphandle. Ngako oko, iikhoreji eziphambili zogqirha zentsholongwane zifumaneke kwaye ziboniswe kwi-software ye-GIS, kunye neendawo apho iikorori zicetyiswa ukuba zisuswe nazo ziboniswe kwi-platform ye-GIS yokulawula ukusasazeka kwesi sifo ye dengue
Idatha echaphazelekayo evela kumaziko okuLawula iTeyi yaTaiwan athatyathwa, ahlaziywa kwaye akhonjiswe kwi-platform ye-GIS yokukhangela i-corridors ehamba phambili yezinyosi. Emva koko, isincomo senziwe ukupheliswa kwezi ngqungquthela eziphambili ukubeka ingxaki phakathi kobukhulu bendawo nganye nokufezekisa injongo yokuthintela ukusasazeka.
I-Network-time Network yeendawo zokuhlala kunye ne-Movement of insects.
I-network-time network iqulunqwe ngokukodwa ngamacandelwana kunye nemigca, ephakathi kwamaxesha ahlukeneyo. Inombolo nganye ichaza indawo yokuhlala apho iifowuni zogqirha zifunyanwa khona, yenziwa phakathi kwendawo ehambelana nayo. Kwaye umgca ngamnye odibanisa iimbalo ezimbini ubonisa umzila weendawo zokuhlala ezimbini kwindawo yokunyakaza kwemiyane. Ukongezelela, imizila ingahlukaniswa zibe zimbini iintlobo zekhonkco ezidibanisa ii-nodes ezimbini ngexesha elifanayo lokulala okanye ixesha elithile lexesha. Umgca oqhubekayo umela umzila weendlela zokuhambisa, ngexesha elide nje ukuba amaphuzu amabini aphelileyo ahleli ngexesha elifanayo. Okwangoku, umgca onamachaza umela ukuhamba kweendlela ezinokubambisa ngexesha elibini, ngokude nje ukuba ezi zimbini ziphelile kwixesha lexesha. Inethiwekhi yendalo yeminyango ye-dengue enegciwane iyakhiwe ngokwemigaqo yangaphambili.
Ukubalwa kokubaluleka kwekhonkco nganye
Ukuhlalutya kusetyenziswa kwinethwekhi yezinto eziphilayo kunye nenkcazo yokuhlaziywa kwexesha-mali ukuchaza intsingiselo yekhonkco nganye. Ukongezelela, ukuchongwa kweengongoma ezakhelene nabo kuzakuvumela ukuchaza ukutshintshana komtshini.
Ukudibanisa iintlobo kunye neempawu
Ngokuhambelana neempawu zesikhashana zeekhonkco ezifanayo okanye ngamaxesha ahlukeneyo, kunye neziphumo zohlalutyo ezibandakanya isixhumanisi sehlabathi kunye nesiqhagamshelo sendawo. Ikhonkco ithathwa njengeyona nto ibaluleke kakhulu. Isici esinqamlekileyo sichazwe ngokufanayo kunye nomzila ongundoqo kunye nokuphambili kwendluliselo yentsholongwane. Ukongeza, ikhonkco kwixesha elifanayo okanye ezahlukileyo libonisa ubunzima obuninzi bokudlulisela umngcipheko. Ukugqitywa kweendlela ezahlukeneyo zokunxibelelana neSoftware ye-GIS, kuvumela ukujonga ngeso sikhokelo esiphezulu esakhiweyo kumaxesha afanayo kunye ahlukeneyo.
Kule meko, lo msebenzi wawuqhutywa ngokusetyenziswa I-SuperGIS Desktop
Oku akusiyo entsha. Siyakhumbula iimephu zeDeveli Snow for the detection of dengue. Kule meko, ukufikelela esinalo kwezobuchwephesha kuyahluka kwaye kunokuba sibe ngamanzi angcolileyo njengalezo zihlandlo, ngumvolonti
Ukufumana ulwazi oluninzi, ungabona iphepha le-Supergeo Technologies.
Post edlulileyo«Edlulileyo UPSOCL - Indawo yokuphefumlelwa
Post Next Indlela yokuvula, ilebula, kunye nefayile ye .shp kunye ne-Microstation V8iOkulandelayo "